WBOn tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhachuu ibsu illee gama isaan … – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooWBOn tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhachuu ibsu illee gama isaan …
Waraanni Bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhachuu ibsu illee gama isaan mootummaan deebii laachuu irraa of qusateera
Keelloo: Fulbaana 14,2021
The shining victory of the Oromo Liberation Army in Western Oromi, Fulbaana 13, 2021
Erga duula waraanaa bifa addaan waraanni Bilisummaa Oromoo WBO’n torban lama dura eegalee as haleellaa jajjabaa waraana mootummaa irratti fudhachuu beeksisaa jira.
WBO’n tarkaanfii fudhataa jiru kanaan ganda irraa gara aanaalee dhuunfachuu, aanaalee irra darbee gara godina dhuunfachuutti tarkaanfataa akka jiru ibsaa jira.
Torbanuma darbe keessa magaalaa guddoo Horro Guduruu Wallaggaa Shaambuu dhuunfachuuf haleellaa jabaa gaggeessuu isaa WBO’n gabaasee jira. Heellaa kanaanis kasaaraa lubbuu fi qabeenyaa qaamolee waraanaa mootummaa irraan gahuus gabaaseera.
Tarkaanfii kana jabeessuub gabaasa har’a baasaa jiruun Waraanni Biliisummaa Oromoo Salaalee fi Ada’aa Bargaatti Waraana Mootummaa irratti haleellaa fudhachuun himameera.
Tarkaanfii kanas Kaaba Shaggar Salaalee Aanaa Warra Jaarsoo Magaalaa Hoosee keessatti har’a Fulbaana, 14/2021 lafa barii jala Waraanni Biliisummaa Oromoo Onichaa waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen haleellaa guddaa gaggeessuun himame.
Tarkaanfii kanaan waraana mootummaa irraa loltoonni hedduun ajjeefamuun reeffaa fi madoon gara Salaaleetti fe’amaa jiraachuu Waraanni Biliisummaa Oromoo Onichaa ifoomseera.
Lola Waraana Billisuma Oromo fi waraana mootummaa gidduu jiruun haleellaan raawwatamu guutummaa Oromiyaa keessatti ta’uu kan ibsu Waraanni Billisuma Oromo; hanga qabsoo bilisummaa Oromootti gudunfaa Biliisummaa tolchutti haleellaa jajjabaa raawwachuu irraa akka duuba hin jenne ifoomsa.
Guyyaa kaleessaa Fulbaana 13,2021 Oromiyaa Wallagga Bahaa Baloo Bareedaa fi Angar keessatti waraanni Bilisummaa Oromoo humni furgaatuun tarkaanfii fudhachuun gabaafamee jira.
Tarkaanfii kana kaleessaa fudhachuu kan himu WBO’n, loltoota humna addaa naannoo Benishaangul Gumuuz 3F lamaa fi meeshaa waraanaa hedduu booji’uu isaas eeree jira.
Sodaaf yaaddoo tarkaanfii WBO’n fudhatamaa jiru damdamachiisuu kan fakkaatu waraanni mootummaa konkolaataa hedduudhaan halkan kaleessaa gara lixa Oromiyaatti guuramaa bulaniiru.
Haleellaa tibbana fudhataa jiru isa jabaaf ijibbaataa ta’uu kan himu WBO’n, qaamolee mootummaa hedduu onaaleef araddaalee Oromiyaa hedduu keessaa adamsee haleelaa akka jiru himeera.
Oduma wal fakkaatuun Waraanni Bilisummaa Oromoo Wallagga Bahaa Haroo limmuu jalatti kan argamtu Magaalaa Bariisoo seenuun Fulbaana, 11/2021 lola jabaa waraana mootummaa waliin geggeesseen loltoota hedduu ajjeesuun kaan booji’ee guutummaan guutuutti magaalicha qabachuun, uummanni hedduminaan bahee gammachuu isaa ibsataa ooluun beekameera.
Akkasuma Gujii Bahaa Gooroo Doolaatti Waraanni Bliisummaa Oromoo Fulbaana, 12/2021 ganama Magaalaa Harqalloo seenuun waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen hedduu ajjeesuu beeksiseera.
Gujii Aanaa Liibanitti Waraanni Biliisummaa Oromoo Cibraan Soddom Boroo Fulbaana, 12/2021 haleellaa waraana mootummaa irratti raawwateen waraanni mootummaa haleellaa irratti raawwatame baqatee gara magaalaa Nagaleetti baqachuun isaa barameera. Achuma magaalaa Nagallee Booranaa ganda 01 Araddaa Gabaa Horiitti Waraanni Biliisummaa Oromoo kaleessa Fulbaana, 12/2021 waraana mootummaa haleeluu ifoomseera.
Gabaasa Hoggansi Ol’aanaa ABO-WBO tibba darbe baase keessatti illee haleellaa waraana mootummaa irratti fudhateen kasaaraa irraan gahuu ibsaa jira.
Waraanni Bilisummaa Oromoo Bobbaa Garaa Garaa jalatti hiriiruun golee Oromiyaa maratti tarkaanfii waraana mootummaa Itoophiyaa irratti fudhachaa jiruun injifannoo galmeessaa jiraachuu Dubbi Himaan Hoggansa Ol’aanaa ABO-WBO Odaa Tarbii gabaasa fuula tiwiitera isaa irratti dhoobeen beeksiseera.
Akka gabaasa kanaatti Waraanni Biliisummaa Oromoo Zoonii Bahaa Bobbaan Nadhii Gammadaa Gartuu Komaandoo jedhamuun kan beekaman Fulbaana, 3/2021 Harargee Lixaa Aanaa Mi’eessootti waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen 3 ajjeesee lama madeessuun, meeshaa AKM 5 irraa hiikee moona qabsoo biliisummaa Oromoof galii gochuu gabaaseera kan jedhu Odaa Tarbii; Achuma Aanaa Mi’eessootti Fulbaana, 7/2021 Waraanni Biliisummaa Oromoo Gartuun Komaandoo waraana mootummaa naannoo sanatti bobbaa’ee jiru irratti tarkaanfii fudhateen 9 ajjeesuun 10 madoon adabeera jedheera.
Oromiyaa Zoonii Kibbaatti Waraanni Biliisummaa Oromoo Bobbaan Elemoo Qilxuu Cibraan Soddom Booroo Gujii, Aanaa Gumii Eldallootti Fulbaana, 4/2021 waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen 12 ajjeesuun 8 maddeesse.
Akkasuma Fulbaana, 7/2021 achuma Aanaa Gumii Eldallootti Waraanni Biliisummaa Oromoo Cibraan Soddom Booroo konkolaataa shan kan waraana mootummaa Irreessa Liban Burii irraa fe’ee deemaa ture irratti tarkaanfii fudhateen waraana mootummaa irraa 16 ajjeesuun 21 madeessuu beeksise. Waraana haleelame kana tumsuuf waraanni mootummaa bakka haleellaan itti raawwatame kanatti imalaa ture bakka Karra Waleensoo jedhamutti Waraana Biliisummaa Oromoon dhaabsifamuun haleellaa raawwatameen waraana mootummaa irraa 8 ajjeefamuun 11 madaa’uus gabaasa isaa keessatti haammachiisera.
Oromiyaa Zoonii Lixaatti Waraanni Biliisummaa Oromoo Bobbaan Laggasaa Wagii Baha Wallaggaa Aanaa Saasiggaatti tarkaanfii Waraanni Biliisummaa Oromoo fudhateen aanaan kun to’annoo Waraana Biliisummaa Oromoo jala jiraachuu hordofee Fulbaana, 3/2021 humni waraana mootummaa Naqamtee irraa garasitti imalee Waraana Biliisummaa Oromoo loluuf yaaliin taasise haleellaa Waraana Biliisummaa Oromoon fashaluu beeksiseera.
Kanuma hordofee Saasigga, Baloo, Bareedaa, fi Gabaa Sambataa bakki jedhaman to’annoo Waraana Biliisummaa Oromoo jala jiru jedheera. Tarkaanfii kana hordofuun hidhamtoonni siyaasaa 150 ta’an Waraana Biliisummaa Oromoon hidhaa irraa hiikamuunis gabaafameera. Hawaasni Oromoo Ona kana keessa jiraatanis Waraana Biliisummaa Oromoon baga nagaan dhuftan jechuun simannaa taasisaniiruuf jechuun dabaluun ifoomseera.
Fulbaana, 4/2021 Waraanni Biliisummaa Oromoo Zonii Lixaa Cibraan Odaa Buluuq Horro Guduruu Wallaggaa Shaambuutti kaampii waraana mootummaa irratti halleellaa raawwateen waraana mootummaa irraa 49 ajjeesuu dubbi himaan Hoggansa Ol’aanaa ABO-WBO beeksiseera.
Fulbaana, 5/2021 Waraanni Biliisummaa Oromoo Zoonii Lixaa Wallagga Lixaa magaalaa Begiitti haleellaa waraana mootummaa irratti taasiseen waraana mootummaa irraa 130 ajjeesuun danuu madeessuu gabaasi Hoggansa Ol’aan’a ABO-WBO kun ni ifoomsa. Akkasuma meeshaan waraana hedduun kanneen meeshaa waraanaa gurguddaan keessatti argaman booji’amuun moona qabsoo biliisummaa Oromoof galii ta’uus ni ifoomsa.
Fulbaana, 9/2021 Waraanni Biliisummaa Oromoo Cibraan Odaa Bulluq Horro Guduruu Wallaggaa Shaambuu bakka Lakkuu jedhamu kan Magaalaa Shaambuu irraa km10 irratti argamutti haleellaa waraana mootummaa irratti raawwateen waraana mootummaa irraa 20 ajjeesuu gabaasaan kun ni eera.
Oromiyaa Zoonii Giddu Galeessaatti Waraanni Biliisummaa Oromoo Bobbaan Taaddasaa Birruu Fulbaana, 7/2021 Kaaba Shawaa Aanaa Kuyyuu bakka addaa Qarree Ta’aa jedhamutti waraana mootummaa Abiy garas bobbaafaman irratti halleellaa raawwateen 23 ajjeesuun 13 madeessuu gabaasaan Hoggansa Ol’aanaa ABO-WBO kun ni ifoomsa.
Tarkaanfii fudhatamaa jiru kanaan gama WBO’n miidhaan dhaqqabe waan ifoome kan hin qabne akkasuma; gama isaan mootummaan Itoophiyaa ammoo, qaamoleef qondaalonni mootummaa miidiyaa hawaasaa irratti ibsaa akka jiranitti WBO irratti haleellaa fudhachuu dubbataa jiru.
Haleellaa WBO dhaan irratti fudhatamaa jira jedhamu hanga ammaatti deebii kan hin laanne mootummaan, uummata waliin ta’ee dhabamsiisaa akka jiru eera.
Torbanoota darba keessa qondaalonni mootummaa hedduun nama uummata Oromoo biraa dhageettii gootummaa addaa horataa jiru Liiban Gurraachaa Kibba Oromiyaa keessatti rukutuu gabaasaa turan.
Kana malees ajajaan WBO zoonii giddu galaa Sanyii Nagaasaa haleelamee lubbuun darbe jechuun torbee tokkoof erga gabaasaa turaniin booda, Sanyiin aangoo loltummaa keessatti qooda argateera kan jedhu deebi’anii ammoo gabaasan.
Gabaasni wal dhahaan qaamoleen mootummaa dhimma loltoota jajjaboo dhageettii argatan WBO irratti balballoomsu yeroo adda addaatti oolee bulee soba ta’aa adeemuun, waraanni mootummaa haalaan haleelamaa akka jiru shakkii uummata keessa bulcheera.